(L) ကိုသုတေသနကြောက်လန့် (2011) မှစ. စိတ်လှုပ်ရှားစရာရင်းမြစ်ရှာပြီး - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
(L) ကိုသုတေသန (2011) ကြောက်လန့် မှစ. စိတ်လှုပ်ရှားစရာရင်းမြစ်ရှာပြီး
အဆိုပါသည်ဆောင်းပါးကိုဒီလေ့လာမှုအကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါ VTA Dopamine အာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောနှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်နေရင်မြန်အောင်၏ convergence ထုတ်ယူခြင်း
တွမ် Corwin, တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2011 အားဖြင့်
ဂျော်ဂျီယာကျန်းမာရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှင့်ရှန်ဟိုင်း ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဂျီနိုမ်အင်စတီကျူမှသုတေသနပြုချက်အရလူအချို့တို့၏ ဦး နှောက်သည်အနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့မှုအနည်းငယ်ခံစားရနိုင်သည်။ သူတို့၏သုတေသနကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်က PLoSOne ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ, ventral tegmental ဧရိယာ, ဒါမှမဟုတ် VTA အတွက် dopamine ထုတ်လုပ်အာရုံခံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
အဆိုပါသုတေသီများသည်အဘယ်သူ၏ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်များ၏ Real-time ပစ်ခတ်ရန်မှတ်တမ်းတင်ဖို့လျှပ်နှင့်အတူကြိုးခဲ့ကြသည်ကြွက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောမောက်၌ရှိ၏ box ကိုလှုပ်အဖြစ်, အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှု, ထိုကဲ့သို့သောသကြားတောင့်ကိုလက်ခံရရှိကဲ့သို့၎င်း, ကွောကျမကျ inducing လှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ နီးပါးသမျှသောဦးနှောက်ဧရိယာအတွင်းရှိ dopamine ထုတ်လုပ်အာရုံခံကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ရပ်များမှတုန့်ပြန်, Tsien ကဆိုသည်။